Ihe na 08 / 29 / 2018 by 阿斯劳 dere na Ngwá Mgbochi Mmekọahụ.
Sildenafil citrate 171599-83-0 bụ ọgwụ eji agwọ ọrịa na erectile na ọbara mgbali elu (PPH). Sildenafil nwere ike họrọ gbochie ọrụ PDE5 na ụmụ mmadụ. A na-egosipụta PDE5 nke ọma na amụ amụ na obere na anụ ahụ na akụkụ ndị ọzọ. Mgbe ị nụsịrị sildenafil, corpus cavernosum vasomotor muscle na-agbada n'okpuru ọgwụ nke ọgwụ ahụ, ọbara na-arịwanye elu, ahụ ahụ na-ekpuchi ahụ, a na-arụkwa amụ, si otú a na-eweta mmetụta ọgwụgwọ na arụ ọrụ penile erectile.
Flibanserin 147359-76-0 bụ ọgwụ ebuputara maka ọgwụgwọ ịda mbà n'obi, mana achọpụtala na ọ nweghị ọrụ na mpaghara a ma ugbu a anabataghachila ya maka ọgwụgwọ ọrịa mmekọahụ na-adịghị mma (HSDD) na ụmụ nwanyị - agbanyeghị, nrụpụta ekwenyeghi ebe a emeela ka ọtụtụ esemokwu gbara gburugburu isiokwu nke flibanserin (Addyi) na mmetụta ọ na-ekwu.
Ọ bụrụ na ị nwee nsogbu nrụrụ, ọgwụ mmekọahụ nwere ike inyere gị aka ịlụso ya ọgụ. Na mgbakwunye na ịlụ ọgụ megide nsogbu a, ị ga-ahụkwa mmekọahụ na-enye afọ ojuju ma ị nwere ike igboju di ma ọ bụ nwunye gị n'atụghị ụjọ "mmebi" n'oge omume ahụ; mmetụta na-akụda mmụọ na nke ihere na oge.
N'oge ndụ, a pụrụ inwe oge mgbe nwoke ma ọ bụ nwanyị na-achọghịzi iso di ma ọ bụ nwunye ha nwee mmekọahụ. Nsogbu a kachasị bụrụ nke uche na ọ nwere ike ịbụ n'ihi ihe dị iche iche: ike ọgwụgwụ, nsogbu onwe onye, ​​nrụgide… Ndị a nwere ike ibute ọdịda libido na obi ụtọ.
MAGL inhibitor na FAAH Inhibitor: JW-642 & OL-135 & PF-750 7 Best Nootropics (Smart Drugs) na ahịa nke 2021